काठमाडौँ, २४ भदौ । कांग्रेसले आजबाट तीन सय ३० वटै प्रदेश सभा क्षेत्रमा दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु गर्दै छ । खासगरी, सामाजिक संवाद गर्ने गरी अभियान चलाइने कांग्रेसले जनाएको छ । अभियानमा नेताहरूलाई ‘बोल्ने कम सुन्ने बढी’ गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको छ । अभियानको अन्तिम दिन ७ असोजमा केन्द्रीय तहबाट एउटा मात्र जिल्ला स..
काठमाडौँ, २४ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच १९ दि..
धनुषामा हतियार प्रहार गरी वृद्धको हत्या
धनुषा, २३ भदौ । धनुषामा आइतबार साँझ धारिलो हतियार प्रहार गरी एक वृद्धको हत्या ..
काठमाडौँ, २३ भदौ । भूकम्पले जीर्ण भएको जयवागेश्वरी मन्दिर पुनःनिर्माण गर्न भत्क..
काठमाडौं, २३ भदौं । क्यारेवियन प्रिमियर लिग सीपीएलमा नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछा..
प्रधानमन्त्रीलाई धेरै धपेडी नगर्न चिकित्सकको सुझाव
काठमाडौं, २३ भदौं । दुई साता लामो उपचारपछि स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र पार्टी दुवैतर्फका काम सुस्तरी अघि बढाएका छन् । उनी बालुवाटारबाट बाहिर निस्केका छैनन् । प्रधानमन्त्री निवासमै सामान्य भेटघाट र सरकारी काम गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार चिकित्सकले ओलीलाई धेरै धपेडी नगर्न सुझाएका छन् ।..
बाजुरा, २३ भदौ । सडकको सहज पहुँच नहुँदा करोडको स्याउ बारीमै थन्किएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । मार्तडी कोल्टी सडक वर्षात्का कारण अवरुद्ध बनेपछि ढुवानी समस्याकै कारण करोड मूल्यको स्याउ बारीमै थन्किएको हो । जिल्लाको स्वामिकात्तिक, जगन्नाथ गाउँपालिकाबाट पिलुचौर ल्याएर ढुवानी गर्ने सोच बनाएका स्याउ किसानको सपना समयमै सडक नखुल्दा ..
काठमाडौं, २३ भदौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दबाब बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुरमा स्वास्थ्य उपचार गराएर स्वदेश फर्केलगत्तै असन्तुष्ट पक्षका नेताले पार्टीको काम चुस्त रुपमा अघि बढाउन दाहाललाई कार..
चाबहिल–साँखु सडक दशैंसम्ममा पिच नभए ठेक्का तोडिने
काठमाडौं, २३ भदौं । चाबहिल–साँखु सडक खण्डको चाबहिलदेखि जोरपाटीसम्म दशैंसम्म पिच नभए सरकारले ठेक्का तोड्ने भएको छ । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले दशैंभित्र पनि पिच नभए ठेक्का तोड्ने जानकारी दिएका छन् । यो सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले २०७२ को असोजमा दुई वर्षमा पूरा गर्ने गरी ठेक्का लगाएको ..
८६ हजार निजामती कर्मचारीमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी शून्य
काठमाडौें, २३ भदौं । सरकारले विगत वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि देशभरका झण्डै ८६ हजार निजामती कर्मचारीबाट सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी फेला पार्न सकेन । निजामती दिवसका अवसरमा सरकारले प्रत्येक वर्ष एक जना कर्मचारीलाई सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गर्ने गरेको थियो । तर, लगातार २ वर्षसम्म सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटेको सरकारले यस वर्ष पनि सर्वोत्..
भद्रपुर, २३ भदौ । पन्ध्र दिन अघि पर्यटन वर्ष सन् २०२० लाई सफल बनाउने उद्देश्यले शुरु गरिएको भारतको सिलगुढीदेखि काठमाडौँसम्मको सिधा बस सेवाविरुद्ध काँकडभिट्टावासी चर्को विरोधमा उत्रिएका छन् । भारतको पश्चिम बङ्गालस्थित सिलगुढीबाट सिधै काठमाडौँ बस सञ्चालनले काँकडभिट्टावासीको आर्थिक गतिविधि धराशायी बन्ने भन्दै स्थानीय व्यवसायी विरोध..
सुरुङ्गा २३ भदौ । झापाको गौरादह नगरपालिकामा अज्ञात समूहले आइतबार राति बम विष्फोट गराएको छ । विफोष्टका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्रले प्रयोग गर्दै आएको गाडी पूर्णरुपमा क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रेष्ठका अनुसार राति १२ः३..
काठमाडौं रिङ्गरोडमा आजदेखि बिजुली बस चल्दै
काठमाडौें, २३ भदौं । आज (सोमबार) देखि काठमाडौंको रिङरोडमा बिजुली बस सञ्चालन हुँदैछ । सुन्दर यातायातले चिनियाँ कम्पनी ‘बिएके’ ले निर्माण गरेको बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । आज एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले बिजुली बस शुभारम्भ गर्ने सुन्दर यातायातका सञ्चालक सुरेश पोखरेलले जानकारी दिएका..
डा. सन्दुक रुइतलाई डेंगी, नर्भिक अस्पताल भर्ना
काठमाडौें, २३ भदौं । आँखाका वरिष्ठ डाक्टर सन्दुक रुइतलाई पनि डेंगीको संक्रमण भएको छ । उनलाई हाल थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । तिलगंगा आँखा केन्द्रका निर्देशक डा. रुइत सरल र कम लागतमा मोतिबिन्दुको चिकित्सा पद्धति ’रुइतेक्टोमी’का शुरुवातकर्ता हुन् । सन् २००६ मा रमन म्याग्सेसे पुरस्का..
पूर्वमन्त्री हिसिला यमी दुर्घटनामा
काठमाडौें, २३ भदौं । पूर्वमन्त्री हिसिला यमी मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर घाइते भएकी छन् । पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी नेपालकी नेतृ यमी आइतबार दिउँसो दुर्घटनामा परेर घाइते भएको जनाइएको छ । पार्टी कार्यालय बालकुमारी जाँदै गर्दा बल्खु चोकमा स्कुटर दुर्घटनामा परेर घाइते भएकी उनको बिएण्ड बी अस्पतालमा उप..
काठमाडौँ, २२ भदौ । पछिल्लो समय देशका ४८ जिल्लामा भेटिइसकिएको डेङ्गु रोग ‘प्रकोप’का रुपमा फैलिँदै जाँदा रोग नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गम्भीर बन्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैककको शून्य समयमा सांसदहरुले रोग नियन्त्रणमा मन्त्रालयको प्रयासका बारेमा मन्त्रील..
काठमाडौँ, २२ भदौ । श्रीलङ्कामा जारी एसीसी यू–१९ एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको आफनो दोस्रो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई जितका लागि २६२ रनको चुनौती दिएको छ । कोलम्बोको पिएसएस क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित ५० ओभरमा आठ विकेट गुमाउदै २६१ रनको योगफल बनायो । नेपालका लागि पवन सर्रा..
काठमाडौँ, २२ भदौ । नेपाली काङ्ग्रेसले ‘हिमाल, पहाड, तराई–मधेश नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय जागरण अभियान’ को दोस्रो चरणका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ । यही भदौ २४ गतेदेखि प्रारम्भ हुने दोस्रो चरणको जागरण अभियानका लागि आज प्रदेश नं १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि प्रतिनिधिको नाम टुङ्गो लगाई खटाइएको पार्टी कार्यालयले जना..
काठमाडौं, २२ भदौं । हाउजिङ कम्पनी ग्रिनहिल सिटी प्रालिले काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माण गरेको घर मंगलबार राति भत्किएपछि निर्माण कम्पनीको क्षमता र गाम्भीर्यमाथि उपभोक्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। ‘ग्रिनहिल सिटी आवास निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाही हो यो, मानिसले जीवनभर बस्नुपर्ने र सुरक्षित भएको अनुभव गर्न पाउनुपर्ने घर पिँध नभएको लोटा..
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारको लगानी उपलब्धिमूलक हुनुपर्ने: राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौँ, २२ भदौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानीको प्रतिफल उपलब्धिमूलक बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । ४०औँ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा नेपाल विद्या भूषण पदक र नेपाल छात्रा विद्या पदक वितरणका लाग..
काठमाडौँ, २२ भदौ । यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरहरुले अनिवार्यरुपमा पोशाक लगाउनुपर्ने भएको छ । अखिल नेपाल यातायात मजदूर सङ्घ कलङ्की–बल्खुले शनिबार यहाँ आयोजना गरेको यात्रुमैत्री व्यवहार तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा यातायात मजदूरले पोशाक र परिचयपत्र अनिवार्य लगाउनुपर्ने बताइएको हो । कार्यक्रममा महानगरी..
दुई वर्ष पुराना मुद्दा टुंग्याउन सर्वोच्चको सर्कुलर
काठमाडौं, २२ भदौं । सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष नाघेका पुराना मुद्दा एक वर्षभित्रै टुंगो लगाउन सबै अदालत तथा न्यायाधिकरणलाई सर्कुलर गरेको छ । वार्षिक योजना बनाएर मुद्दा सक्न परिपत्र गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्चको योजना समितिको निर्णयअनुसार सर्कुलर गरिएको हो । हाल मुलुकभरका सबै अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या १२ हज..
काठमाडौं, २२ भदौं । गत वर्ष परीक्षाअघि नै दुई विषयको प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएपछि आलोचित बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायको डिन कार्यालयले यसपटक गलत प्रश्न सोधेको छ । शुक्रबार भएको एमएड प्रथम सेमेस्टरको एडभान्स एजुकेसन साइकोलोजी (एड ५१३) विषयको परीक्षामा फाउन्डेसन अफ एजुकेसनको प्रश्न सोधेको हो । यिनै प्रश्न सोधिएको..
महोत्तरी, २२ भदौ । महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–३ मा दाजुभाइबीचको झगडाले आमाको ज्यान गएको छ । हिजो शनिबार साँझ आपसी झगडामा घाइते भएका छोरालाई उपचारका लागि अस्पताल ल्याउन लागेकी आमाको आपूm चढेको एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा ज्यान गएको हो । बर्दिवास–३ पाटुका दाजुभाइ २१ वर्षीय गङ्गा वादी र १८ वर्षीय उमेश वादी आपसमै कुटपिट मच्चाउँदा घ..
७० हजारलाई डेंगु, वैशाखयता अस्पताल पुगेकै बिरामी ७ हजार
काठमाडौं, २२ भदौं । पछिल्लो समय प्रकोपका रूपमा फैलिएको डेंगुबाट करिब ७० हजार व्यक्ति प्रभावित भएको चिकित्सकले बताएका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) को तथ्यांकअनुसार सरकारी अस्पतालमा जँचाउन आएका बिरामी मात्रै वैशाखयता करिब७ हजार छन् । निजी अस्पतालमा जँचाएका र अस्पताल आइनपुगेका बिरामी संख्या जोड्दा करिब ७०..